राजपाले समर्थन फिर्ता लिनु खुसीको कुरा हो: प्रधानमन्त्री « Postpati – News For All
राजपाले समर्थन फिर्ता लिनु खुसीको कुरा हो: प्रधानमन्त्री
फागुन ३०, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु खुसीको कुरा भएको बताएका छन्।
विनाकारण अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर घुर्क्याउने, धम्क्याउने काम राजपाले गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राजपाका लागि गर्न सक्ने जति सबै काम गरेको बताए।
‘अकारण अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर घुर्क्याउने, धम्क्याउने ? जो उचित होइन। सरकारले गर्ने जति काम गरेको छ। उहाँहरूसँग कुनै सम्झौता गरेर तोडिएको त होइन। सरकारको तर्फबाट सक्दो गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उपचार खर्च दिएन कि । जेलबाट छुटाइएन कि । बाँकी वक्यौता कहिले कहिलेका हुन् तिरिएन की ! सपथ ग्रहण नगराएकालाई गराइएन की सबै त गरेको छ।’
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार को दिन प्रकाशित